Home » Computers & Technology » အင်တာနက် (မရှိမှ) ဆော့လို့ရမယ့် Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း
Posted by Myanmar Web Designer on May 7, 2015 in Computers & Technology | 10 comments
၂။ အင်တာနက် မရှိမှ ရပါမယ်။ (ရှိရင်လည်း ပိတ်ထားရပါမယ် )
မြင်ရတဲ့ စာမျက်နှာပေါ်က ဒိုင်နိုဆောလေးကို လက်နဲ့ တို့လိုက်ပါ။ ဒါပါပဲ၊ ဂိမ်းစဆော့လို့ရပါပြီ။ ဆော့ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း မြန်လာလို့ ကျွန်တော်ကတော့ အမှတ် ၅၀၀ ကျော်မှာ Game over ဖြစ်သွားပါတယ်။
Computer မှာ ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ?
Computer မှာ ဆော့ချင်သူများအတွက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ ဒိုင်နိုဆောကို သွားပြီး click လုပ်ရင်တော့ ဘာမှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Computer မှာ Game ဆော့ရင် အပေါ်ခုန်တဲ့ ခလုတ်တွေဖြစ်တဲ့ Space bar တို့ အပေါ်မျှားတို့ကို နှိပ်မှရပါမယ်။ ဂိမ်းစလို့ ခုန်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ ခလုတ်တွေ နှိပ်ပြီး ဆော့နိုင်ပါတယ်။
ဆော့လို့ ကောင်းတယ်ဆိုရင် Facebook က သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေလိုက်ပါဦး။
Credit: အင်တာနက် (မရှိမှ) ဆော့လို့ရမယ့် Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း
မိုက်တယ် ဆော့ကြည့်ဦးမှပဲ။ Chrome ကိုတော့ ပထမပေါ်ကစက သုံးပြီး အခုတော့လက်လွှတ်လိုက်တာ ကြာပြီ။ သူက မော်ဇီလာထက် ပိုလေးလေးလာလို့။
Myanmar Web Designer says:
အမှန်က Firefox က ပိုလေးတာဗျ၊ ဒါပေမယ့် သုံးတာကြာလာရင်တော့ သုံးပြီးသားတွေ မှတ်ထားရလို့ browser တိုင်း လေးကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို သုံးတာချင်းတူရင်တောင် Chrome က ပိုပေါ့တယ်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ Chrome သုံးရင် Bookmark တွေ၊ History တွေကို Sync လုပ်တာတွေကလည်း Google နဲ့လုပ်တာဆိုတော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်။ နောက်မှ အဲဒီ Sync လုပ်တာလေးတွေပါ တင်ဦးမယ်ဗျို့ …
၁၀၀ ကို မ​ကျော်​ပါဘူးဗျာ !
၅၀၀ ကျော်တယ်ဆို ကြွားတယ်လို့ ထင်မှာလားးးးး
အရုပ်က ငြိမ်ပြီး ဆူးပင်တွေက သွားနေလို့ မျက်စေ့လည်နေတာကို အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနဲ့ အရုပ်ရဲ့ အရှေ့ အနေတော် နေရာမှာ casor (စာလုံးပေါင်းမှန်ရဲ့လားတော့ မသိဘူး။ စာရေးဖို့ နေရာချတဲ့ မှိတ်တုတ်မှတ်တုတ်နဲ့မျဉ်းကို ပြောတာ) ထားပြီး ဆူးပင်က အဲဒီနေရာကို ရောက်ရင် ခုန်လိုက်တယ်။
အမှတ်များလာတာနဲ့အမျှ မြန်လာရင် အကွာအဝေးကို စိတ်မှန်းနဲ့ နည်းနည်းတိုးပြီး အဲဒီနေရာမရောက်ခင်လေးမှာ ခုန်လိုက်ရတယ်။
ပြောမယ့်သာပြောရတယ် လူကပါ လိုက်ခုန်နေမိတာလည်း ရှိသေးးးး
ကြွားတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူးဗျာ၊ သူများတွေဘယ်လိုဆော့လည်းတော့မသိဘူး အင်တာနက်မှာ High score ရှာကြည့်လိုက်တာ။ ၂ ထောင်နဲ့ ၄ထောင်ကြားတွေ အများကြီးပဲဗျ :O
ဒါနဲ့ cursor လို့ပေါင်းတာဗျ …